टि-१० लिग : डेब्युमा कुशल मल्लको राम्रो प्रदर्शन – WicketNepal
टि-१० लिग : डेब्युमा कुशल मल्लको राम्रो प्रदर्शन
Sakar Sedhain, २०७७ माघ २४, शनिबार २०:१९
अबुधाबी टि-१० लिग अन्तर्गत नेपाली अल-राउण्डर कुशल मल्लले डेब्यु खेलमा कलन्दर्सविरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। तिन नम्बरमा ब्याटिंग गर्न आएका कुशलले १२ बलमा समान १ चौका र १ छक्काको मद्धतमा १८ रन बनाए। लिग चरण र प्ले-अफ खेलमा मौका नपाएका कुशलले तेस्रो स्थानको लागि कलन्दर्सविरुद्धको खेलमा पहिलो पटक मौका पाएका हुन्। नियमित ओपनर क्रिस गेल र ब्याट्सम्यान जो क्लार्क टोलि बाहिर रहँदा कुशलले डेब्यु गर्न पाएका थिए।
टस हारेर पहिले ब्याटिंगको निम्तो पाएको टिम अबुधाबीले निर्धारित १० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १२४ रन बनाएको छ। उसको लागि नाजिबुल्लाह जर्दानले १६ बलमा सर्वाधिक ४५, ओपनर पौल स्टर्लिङले ९ बलमा २६, लिओनार्डो जूलियनले १२ बलमा १९ तथा नेपाली युवा खेलाडी कुशल मल्लले १२ बलमा १८ रन बनाए।
कलन्दर्सको बलिंगतर्फ मोहम्मद झहीद (२-०-१०-२) ले सर्वाधिक २ विकेट लिए। सोहेल तन्विर, ड्यानल अहमद, अलि खान र खुर्सिद अन्वारले समान १ विकेट लिए।
#TeamAbuDhabi bravely faced the bowling volley to rake upascore of 124/6. Let's see how the opposition batsmen fare now against our star bowlers. Stay tuned!#InAbuDhabi #TeamAbuDhabi @ErosNow @T10League pic.twitter.com/wvnV0Y8yAc
— Team Abu Dhabi Cricket (@TeamADCricket) February 6, 2021
यस्तो रह्यो कुशलको प्रदर्शन :-
पौल स्टर्लिङ आउट भएपछि तेस्रो नम्बरमा ब्याटिंग गर्न आएका कुशलले जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिंग गर्दै १२ बलमा १८ रन बनाए। तेस्रो ओभरमा क्रिजमा आएका कुशलले पहिलो बलमै १ रन लिंदै खाता खोले। दोस्रो बल डट खाएका कुशलले तेस्रो बलमा एक रन लिए भने चौथौं बलमा लेग बाइको रुपमा १ रन बटुले। ४ बलमा २ रन बनाएर सुस्त ब्याटिंग गरेका कुशलले पाचौं बलमा २ रन तथा (अलि खानको बलिंग) छैटौं बलमा छक्का हिर्काए। सातौँ बलमा लेग बाइको रुपमा १ रन लिएका कुशलले आठौँ बलमा पनि १ रननै लिए।
एक किनारबाट विकेट गुमाएता पनि कुशलले एक किनार सम्हालेका थिए। नवौं बलमा (खुर्सिद अन्वारको बलिंगमा) चौका प्रहार गरेका कुशलले दशौँ बलमा १ रन लिए। त्यसपछि ११ वौं बलमा १ रन लिएका कुशललाई आफुले फेस गरेको १२ औं बलमा मोहम्मद झहीदले आउट पारे। उत्कृष्ट योर्कर गरेका झहीदको बलमा कुशलले डिफेन्स गर्न खोजेता पनि बोल्ड भए।
गत सिजन सन्दिप लामिछाने र पारस खड्का टि-१० लिगमा सहभागी थिए भने यो सिजन कुशल मल्ल, सोम्पाल कामी र कारन केशी खेलाडीको रुपमा तथा पारस खड्का मेन्टरको रुपमा प्रतियोगितामा सहभागी छन्।
सोम्पालले प्रतिनिधित्व गरेका मराठा अरेवियन्स तथा करन सम्मिलित पुणे डेभिल्स यसअघिनै प्रतियोगिताबाट बाहिरि सकेका छन्।